Dadka reer Taleex oo intii ay isku jeedeen degaankoodii degaamo laga samaystay. | Welcome to Lafweyne.com|
Dadka reer Taleex oo intii ay isku jeedeen degaankoodii degaamo laga samaystay.
Jan 5, 2016 - 1 Aragtiyood
Tan iyo intii shirqoolkii xaaraanta ahaa ee Khaatumo lala yimid magaalada Taleex waxa dadka reer Taleex iyo degaankoodaba usoo hoyatay dhib aanay weligeed hore u arag. Shirkaasi wuxuu ku bilaabmay dhiigga dadkii walaalaha ahaa ee reer Taleex oo la daadiyey. Kaaga sii darane iyadoo dhiiggii qoyan yahay ayaa shir lagu dul qabsaday oo inta foodda laysu geliyey loo kala baxay.
Isku daygii labaad ee la holliyey in dib shir loogu qabtona waxaa ku daatay dhiig intii hore ka badan oo ay ku naf waayeen dad kale oo reer Taleex ahi. Labadaa goorood ee shirarka dhiiggu ku daatayba shar wadayaashu way ogaayeen inaan dadka reer Taleex heshiis ku ahayn in magaaladooda shir lagu qabto, laakiinse waxay ujeeddadoodu ahayd in dadka reer Taleex oo walaaltinnimo iyo isjeceyl, iyo nabad kuwada noolaansho ku caan baxay in laga daadiyo caanahooda oo dhiig faraha loo geliyo.
Mar saddexaadkii la holliyey in shirkii sharka lagu qabtona waxa Taleex ku soo duulay oo gacanta ku dhigtay Somaliland.
Nasiib darroda dhacday dadka reer Taleex marna si miyir qabta uma dersin dhibaatooyinkan loo soo waariday, markii loo kala tegeyna iyagii baa col iyo cadow isu noqday oo dagaallo dhexdooda ah galay waa sidii loogu talo galaye.
Arrinta haddaba nasiib darrada ahi waxa weeye markii la ogaaday inay colloobeen dadkii reer Taleex ayaa waxa weerar deegaamayn ah lagu soo qaaday deegaankoodii illeyn wadajirkoodaa degaanka lagu ilaalin jiraye.
Waxa kaloo xusid mudan in reerka degaamaynta wada oo aanay deris ahayn reer Taleex markii ugu horreysey ay ugacan haadiyeen kooxdii mashruuca Khaatumo horjoogayaasha u ahaa sannadkii 2013kii bilowgiisii . Reerka degaamaynta wadaa waa Laylkase sababta kooxda Khaatumo usoo sal kiciyeen oo degaanka Taleex ugusoo horkaceenna waxay ahayd laba sababood.
Tan koowaad waxay ahayd inay Puntland iyo Laylkase colaad isu geliyaan oo yidhaahdaan Laylkase ayaa Puntland ka baxay oo Khaatumo ku biiray.
Tan labaadna waxay hayd in colaadddii hore ee reer Taleex dhexdooda laga abuuray mid kale loogu daro si loo wiiqo awoodda reer Taleex iyadoo dano siyaasadeed oo fog laga leeyahay.
Reerka hadda Xalin dusheeda degaamaynta ka samaysanaya waxay wax ka degaan inta udhexeysa Eyl, Burtinle ilaa Garoowe hoosteeda. Weligood Nuur Axmed deris ma noqon daaqsinna isuguma iman. Waxa maanta damaca keenay waa kala daadsanaanta lagu arkay reer Taleex.
Waxa nasiib darro ah in Xalin ay joogaan ciidan reer Taleex ah oo ilaa 15 tikniko ah haysta oo nooc walba leh ilaa 100 ninna ay halkaa diyaar ku yihiin. Ciidankaasi waxay Xalin ujoogaan siday isugu dhammaan lahaayeen walaalahooda kale ee reer Taleex oo iyaguna intaa in leeg haysta. Labadaa ciidan ee walaalaha ah ee laysku jiheeyey midkoodna ma hayo ilaa maanta caqligii lagu kala badbaadin lahaa, lagu midayn lahaa, degaankoodana lagu ilaalin lahaa.
Haddaba halkan ka daawada Leylkase oo togga Afrog oo hodanka ah ka samaystay tuulo berritona waxaad maqli doontaan iyagoo Xalin iyo Kacaya magaalo ka samaystay. Waxa sidoo kale degaanka muddoba boob ku hayey Kaskiqabe oo iyana tuugtii Khaatumo ugacan haadiyeen.
Waxa xusid mudan in Reer Guuraagu isu gudbaan oo daaqsinta wadaagaan waana dhaqan suubban oo Soomaalidu leedahay. Reer Taleex maaha inay daaqsinta dadka ka ceshadaan, laakiin waxa muhiim ah in dadka daaqsinta ku yimaaddaa ixtiraamaan degaanka ay martida ku yihiin. Haddiise ay timaaddo inay magaalooyin ka samaystaan sida tan Afrog oo kale, dadka reer Taleex waxa la gudboon inay illaawaan khilaafaadka dhexdooda ah una midoobaan siday degaankooda u ilaashan lahaayeen.
Tuesday,January 5, 2016 11:50 am at 11:50
Aniogoo ah reer lafweyne hadalkaas aad qortay kuguma raacsani maxaa
yeelay LAYLKASE waxaan ka jeclahay dhulbahante qaarkiis hadii ay i
yeelayaan Lafweyne ayaan soo dejin lahaa waa rag hiil iyo hootoona aan
kaaga tegayn meel kale ka raadso dab aad shido byee-